Khadadka dusha sare ee polylines (Tallaabada 2) - Goofumed
Abriil, 2010 AutoCAD-AutoDesk, Featured, topografia
Post post wuxuu yeelan doonaa joornaal sawir uu ku jiro khadadka mawjadaha, hadda waxaan dooneynaa inaan u bedelno wareegyada ee 3D.
Tani waxaa jira barnaamijyo ku dhowaad automated nidaamka, sida AutoDesk Design Raster, u dhiganta Descartes Bentley ama ArcScan at ESRI. Xaaladdan oo kale waxaan ku sameyn doonaa lug, aniga oo sawiraya polylines.
Waa inaan la samayn shabakadaha casriga ah, laakiin leh polylines caadi ah.
Waxaa lagugula talinayaa inaad abuurto heerar leh magacyada gooladaha waaweyn. Caawinta muuqaalka.
Waxaa macquul ah in la shaqeeyo khadadka dhererka 0.30 si ay u suurtogasho in la arko hormarinta.
Si aad u aragto dhumucda xariiqa, badhanka LWT waa in la dhaqaajiyaa.
Iska ilaali oo ku biir jilbaha.
Tani had iyo jeer maahan lagama maarmaan, laakiin ujeeddooyin waxbarasho, aan aragno sida loo qabtay. Waxay dhacdaa in qaar ka mid ah polylines aan lagu biiri karin sababta oo ah amarka ayaa hakad galay, ama waxaan sameynay geesaha qaar xoogaa tartan ah oo aan ku dhaqmin qalooca.
Xeerka diineed ee jilitaanka ayaa la hawlgeliyaa feerka
Doorashada kala duwan ayaa la doortaa, warqadda M ka dibna geli
Dhamaan polylines waxaan rajeyneynaa inaan daaweyno
Waxaan u isticmaalnaa J si aan ugu biirno
Waxaan u isticmaalnaa S si aan u jilicsanno
Kala dhig suunka polylines
Waa inaad taabatid gooladaha, mid mid, adoo kicinaya guryaha isla markaana u xilsaaraya heerka u dhigma. Xaaladdan oo kale, maadaama ay yihiin 25 sentimitir kasta, qalooca cagaaran wuxuu noqonayaa 322, iyo kuwa soo socdaa Hel buluug wuxuu noqonayaa 322.25, 322.50, 322.75
Marka laga hadlayo kuwa samaawiga ah, eeg in shuruudaha loo isticmaalay in lagu ogaado sida dabeecadda aaggaasi ay tahay. Sababtaas awgeed, kuwa ugu waaweyn waa in lagu dhejiyaa midab kale.
Waxaa la xaqiijin karaa in dhammaantood ay sare u kaceen, iyagoo arkaya aragtida asaasiga ah.
Muuqaal> Muuqaallo 3D ah> NE Isometric.
Ku beddel sanduuqa saliidaha si khadadka looxyo.
Si arrintan loo sameeyo, waxaan tagnaa gudiga bidix, ee ku yaalla tabarka Kalkaaliye, oo waxaan abuuray dusha cusub, nooca TIN.
Halkan, marka dusha sare la abuuro, waxaad arki kartaa guryaha, kuwaas oo ka muuqda Muuqaalada, Watershedsiyo Dib u dhigis. Tani waa halka shuruudaha khadadka wareegga ay ka muuqdaan (Xuduudaha).
Right click guji Xuduudahaka dibna Add.
Faahfaahinta waxaan ku dhejin doonaa curebo la isku sawiro, ka dibna waan sameynaa ok. Kadibna waxaan xulannaa dhammaan polylines-ka aan kumbuyuutarraysannay.
Fiiri sida ka socota, saddex-xaglood ayaa la sameeyay.
Isku hagaajin sifooyinka qotada.
Hal faahfaahin ayaa haysa taas oo keenta rajo beel markii la sameeyo markii ugu horeysay. Waana, in khadadka qaababku u muuqdaan kuwo aan muuqan, laakiin waa arrin Muuji guryaha.
Si taas loo sameeyo, midig-guji oo dooro Beddel qaabka dusha sare. Gudigan, waxaan dooranay tabta Xuduudaha. Gudaha Dhexdhexaadinta Qalabka, waxaan dooraneynaa isla isku midka ah in khariidadu ay la socotay, si loo hubiyo in wax walba si wanaagsan u socdeen.
Qeybaha waaweyn ee 1.00 kasta iyo heerarka labaad ee 0.25 kasta.
Oo halkaas waa. Way cadahay in xad dhaafka ay jirto daaweyn la sameeyo, maxaa yeelay barnaamijku wuxuu isku dayayaa inuu xiro xuduud iyadoo loo maleynayo inaysan jirin wax sii socda oo xaashida kale ah. Waan arki doonaa haddii qoraal kale aan la barbardhigi doonno xogta Google Earth oo aan kor u qaadno halka loo dalxiis tago ee asxaabta Gawaarida.
Post Previous" Hore Contours ka polylines (Step 1)
Post Next dhibaatada 4: Acer Aspire One, ma soo diray in DatashowNext »
3 Jawaab ah "Khadadka khadadka polylines (Tallaabada 2)"
Dorian isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay cusub si civil3d iyo dhibaato sababtoo ah waxaan helay dusha a in qaab kale file billabo ama qaab jir ah oo AutoCAD taas oo aan shaqayn karin gudahood 3d sokeeye Waxaan jeclaan lahaa in ay ogaadaan tallaabooyinka si loogu badalo files kuwa version of civil3d si aynu u shaqayn karno sida haddii ay ahaayeen khadadka dusha aan u baahan in la isticmaalo a mahad Converter file in autodesk horay more hadda.
Haa, marka aad haysato wax badan oo aad digitize Raster Design waa caawinaad weyn.
DHENZHEL isagu wuxuu leeyahay:
HORDHAC HAGAHA WAXBARASHADA DHIBAATOOYINKA EE LAGA HELO, WAXAAN KA HELI KARTAA HADDII AAD HADDII U BAAHAN TAHAY